Indlu yaseJeciHome ehlathini enesauna eLiepaja
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguSvetlana
USvetlana unezimvo eziyi-24 zezinye iindawo.
Indlu yabantu abali-10 kude nesiphithiphithi sesixeko, sijikelezwe yindalo. Indlu enemigangatho emibini eyenziwe ngamaplanga ibekwe kwindawo ezolileyo nenoxolo ejikelezwe ngamahlathi epayini kunye namasimi-ilali yaseJeci.
Indlu ine-terrace yayo, ikhitshi ephangaleleyo kunye nazo zonke izixhobo eziyimfuneko kwigumbi elahlukileyo eli-10m ukusuka kwindlu.
Ngesicelo, siya kulungiselela i-sauna kunye neshawa ebandayo kuwe, iindleko ze-euro ezingama-30 ngeyure. Kwintsimi kukho iindawo zokupaka iimoto, igadi elungiswe kakuhle enengca ebanzi, ujingi.
Ibarbecue yokupheka ibarbecue ye-dp.
Indlu ixhotyiswe ngefenitshala efunekayo, iibhedi ezingatshatanga kwindlu yonke. Kukho ukufudumeza kwigumbi lokulala ngalinye. Indlu ine-sauna, esiya kukulungiselela yona xa uyicela.
Igumbi lokuhlambela lixhotyiswe ngempahla yococeko kunye neshawa (ukuhlamba ngamanzi ashushu kunye nabandayo), ehlala kwindlu eyahlukileyo kwintsimi ye-10m ukusuka kwindlu.
Iholo elinekhitshi elikhulu eliphangaleleyo kunye nazo zonke izixhobo eziyimfuneko zikwisakhiwo esahlukileyo esikwi-10m ukusuka kwindlu. Indlu inendawo yayo yokuphumla.
IJeciHome ikude noololiwe kunye nohola wendlela, ijikelezwe ngamahlathi ompayina kunye namasimi. Kuthe cwaka kwaye kuhle apha! Sizamile ukuqhubeka nemigca yendalo ezolileyo kuyo yonke inkalo yembonakalo yomhlaba yesayithi yethu. Ivenkile ekufutshane yimizuzu eyi-15 ngemoto. Indlela imdaka.
Indlu iqeshwa KUPHELA phambi kwethu (sihlala kwindlu eyahlukileyo kwintsimi). Asiyi kukuphazamisa konke konke, kodwa ngesicelo sakho siya kunceda ekusombululeni imiba yemihla ngemihla. Siza kudibana nawe xa ufika, sikubonise indlu, sikuncede ukuba uhlalise kwaye ucebise iindawo ezinomdla kwindawo ekufutshane.
Indlu iqeshwa KUPHELA phambi kwethu (sihlala kwindlu eyahlukileyo kwintsimi). Asiyi kukuphazamisa konke konke, kodwa ngesicelo sakho siya kunceda ekusombululeni imiba yemihla ngemi…